Shirkadda Apple oo Aqbashay in Furaha Soomaaliya ee 252 wax looga diiwaangashado. – Soomaali 24 Media Network
Shirkadda Apple oo Aqbashay in Furaha Soomaaliya ee 252 wax looga diiwaangashado.
Posted on April 3, 2021 Leave a Comment on Shirkadda Apple oo Aqbashay in Furaha Soomaaliya ee 252 wax looga diiwaangashado.
Shirkadda Apple ayaa oggolaatay in lambarrada Soomaaliya lagu samaysan karo Apple ID, ama kaarka aqoonsiga ee Shirkadda APPLE, maxaase sababay in ay shirkaddu wax ka qabato arrinkaas.
Adeegyo badan oo ay Shirkada Apple leedahay ayaa Soomaaliya ka maqnaa. Waxaa ugu weynaa in lambarka Soomaaliya (+252) aadan ku sameysan karin Apple ID sidoo kalena aadan ku xiran karin adeega labo jeer hubinta amniga (Two Factor Authentication) oo kuu sahlaya in aad akoonkaaga Apple ilaashato.
Bishii Janaayo ee sanadkaan ayaan cabasho ballaaran u dirnay Shirkada Apple. Cabashadaan waxay kuwii hore uga duwaneyd in ay abaabulneyd, tiro ahaana dad badan ka qeybqaateen. Markii hore Apple wax badan kama aysan fahmin cilada ilaa ugu dambeyn ay gal u furtay arrintaan, taas oo iftiimin badan keentay.
Ugu dambeyn, cilladii waa la xaliyey oo maanta qofka Soomaaliga ah lambarkiisa ayuu Apple ID iyo 2FA ku sameysan karaa. Waxaana mahad gaar ah leh Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka Soomaaliya oo hawshaas gacanta ugu weyn ka geysatay.
Weli waxaa dhiman hal arrin oo aysan Shirkada Apple xallin; taasna waa in MasterCards-ka Soomaaliya dhexdeeda lagu qaatay aan wax looga iibsan karin. Arrintaasna waxaan rajeynaa in ay iyadana mar dhaw xalismi doonto In Shaa Allah.
← Saacad Qaali ah oo suuqa xaraashka la geeyey, kadibna cid iibsata la waayey.
Shirka maanta hoggaamiyeyaasha Soomaaliya uga furmay xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho →